[Ayutthaya @ ATang] Iincwadi/Luxury/Projection/Kitchen/New in 21/Garden Studio loft 1872/Inkundla yokutya/Isixeko saseVientiane - I-Airbnb
[Ayutthaya @ ATang] Iincwadi/Luxury/Projection/Kitchen/New in 21/Garden Studio loft 1872/Inkundla yokutya/Isixeko saseVientiane
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguATang
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukulungiswa yale mihla ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex yase-1872. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngeevenkile zokutyela, iibhari ze-gourmet, ukuzonwabisa kunye nokuba sempilweni. Thula phakathi kwesiphithiphithi. Indawo yohambo lwakho.
I-Yahoo yiflethi okanye indlu ekwicomplex eyakhiwe kakuhle yale mihla. Indawo esebenzayo kumgangatho ongasentla nesezantsi imalunga neemitha eziyi-80 square. I-1F yikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala eliphakamileyo; i-2F ligumbi lokufundela, igumbi lokulala elikhulu kunye nomzila wokuzonwabisa. Yeyona ndawo ifanelekileyo yohambo lwakho.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-1872 Garden Studio ikwicala lasentshona leplaza yoshishino. I-Starbucks, i-Haidilao, i-Mojar, i-yuan i-sushi enencasa, i-barbecue yeqonga, i-Edogawa cuisine, i-Tofukuen Hotel, i-Taj Elephant Ancient massage, abafundi be-yoga bane-yoga yakho, igumbi lokuhlala iti, iklabhu yasebusuku (phantsi kokwakhiwa)..., Iflethi isecaleni kwe-Mixcheng, i-Sam Supermarket, i-Grand Theatre.
Umbuki zindwendwe ngu- ATang
Iziqhamo, iziselo, isidlo sakusasa sinokugcinwa kwangaphambili simahla.